विर्तामोडमा युट्युबर काण्ड,परिवारकै बिल्लीबाठ गराउने वास्तविक घटना के थियो ? – Taja Khawar
विर्तामोडमा युट्युबर काण्ड,परिवारकै बिल्लीबाठ गराउने वास्तविक घटना के थियो ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ०७, २०७८ समय: १५:५३:४४
काठमाडौ । विर्तामोडका दुई महिला साथीमध्ये एक जनाको जन्मदिन थियो । दुवै जनाले जन्मदिन मनाउने तयारी गरेपनि त्यो दिन फुर्सद नभएकाले भोलिपल्ट उनीहरू जन्मदिन मनाउन होटलमा जाने तयारी गरे ।
बेलुका करिब ७ बजेतिर उनीहरू दुई महिला र एक पुरुष विर्तामोडको आँखा अस्पताल अगाडि रहेको सिमाना होटलमा गए । त्यहाँ खाना खानेहरूको चहल पहल थियो । होटलमा धेरै मानिस भएकाले कोरोनाको डर हुने भन्दै होटल संचालकले माथिको कोठामा सुरक्षित रुपमा बसेर खान भने ।
‘त्यो दिन उहाँहरू आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै होटलमा धेरै ग्राहक थिए, उहाँहरू पनि आउनुभयो, मैले भिडभाडमा बस्नुभन्दा माथिल्लो तलाको रुम नम्बर १०१ को कोठामा गएर सुरक्षित रुपमा खान भनेको थिएँ‚’ सिमाना होटलका संचालक शंकर प्रसाईंले भने ।
उनीहरूले दृष्यलाई समेत तोडमोड गरेर होटेलमा अनैतिक क्रियाकलाप भएको आशयको सामग्री बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए ।
मुस्लिम समुदायका ग्राहक धेरै भएको र उनीहरूले बोतल हटाउन भनेपछि आफूले माथिल्लो तल्लाको कोठामा जान भनेको सञ्चालक प्रसाई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खाना खाएर सबै ग्राहक गइसकेका थिए । ८ बजेतिर उनीहरू पनि निस्कन लागेका थिए । त्यहीबेला तल च्यानल गेटमा मानिसहरू आएर होहल्ला गरेपछि म हतार/हतार भुईंमा झर्दा प्रहरी र अरु केही व्यक्तिलाई देखेँ ।
मैले गेट खोल्ने बित्तिकै मेरो हातबाट ‘युट्युबरहरू’ले चाबी थुते । प्रहरीले भिडिओ नखिच्न भन्दा उनीहरुले हप्की दप्की गरे ।’ मकालु खबरमा सुमन सुस्केराले लेखेको समाचारको केही अंश साभार गरिएको हो ।
उनीहरूले भिडि‌ओ खिचे‚ अनि युट्यूब र टिकटकमा भाइरल बनाए । भिडिओ सार्वजनिक भएसँगै ती दुई महिलाको परिवारमा कलह शुरु भयो । एक महिलालाई परिवारले ‘स्वीकार नगर्ने’ बतायो । उनीहरूलाई समाजले गलत रुपमा बुझ्यो । उनीहरू तीनै जना र प्रहरीले समेत भिडिओ नखिच्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले गलत गरेको भन्दै ‘युट्युबर’ले होटलमा गएका ती दुई महिला र पुरुषलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दिए ।
‘अर्को दिन भिडि‌ओ सार्वजनिक भएछ,’ पीडित एक महिलाले भनिन्, ‘युट्युब र टिकटकमा भिडिओ भाइरल भएपछि के गर्ने कसो गर्ने भयो, एकमनले त आ त्म ह ‘त्या गर्नेसम्म सोच आयो । होटलमा गएर खाँनु हुँदैन र रु’
‘हामीले गएर होटलमा खाजा खानै नहुने हो ? उनीहरुले मलाई करोडौंको नोक्सानी पुर्‍याएका छन् । म, मेरो परिवार, छोराछोरी, सबैलाई अपूरणीय तनाब दिएका छन्, हामीलाई न्याय चाहियो‚’ उनले भनिन् ।
Last Updated on: August 23rd, 2021 at 3:56 pm